Falanqeyn: Isu furka ganacsiga Afrika - BBC Somali
Falanqeyn: Isu furka ganacsiga Afrika
10 Juunyo 2015
Saddex urur goboleed oo Afrikaan ah ayaa lagu wadaa in ay sameystaan suuq xor ah oo noqonaya kan ugu weyn qaaradda. Urur goboleedka hormarinta bulshada Koonfurta Afrika (SADC), kan hormarinta bulshada Bariga Afrika (EAC), iyo COMESA, ayaa la filayaa in maanta ay dalka Masar ku saxiixdaan heshiis ay ku sameysanayaan urur ay ku mideysan yihiin. In ka badan 600 oo milyan oo dad Afrikaan ah, ayaa la rajeynayaa in ay ka faa’iideystaan marka la hirgeliyo heshiiskan sanadka 2017-ka.
Haddaba si aan waxbadan uga ogaanno heshiiska suuqa xorta ah ee ay ururadaasi saxiixanayaan, ayaa waxaan ka wareysanay Prof. Cabdi Daahir oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha. Maxamed Cabdiraxmaan ayaa marka hore weydiiyay waxa laga la jeedo suuqa xorta ah.